Amiiradda koowaad Victoria oo joogeysey booqashadeedii Sotji - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Amiiradda koowaad Victoria oo joogeysey booqashadeedii Sotji
La daabacay tisdag 4 mars 2014 kl 13.22
Amiiradda koowaad ee Iswiidhen Victoria ayaa baajisAmiiradda koowaad ee Iswiidhen Victoria ayaa baajisey booqasho ay uga qaybgeli lahayd cayaaraha dadka naafada ah oo ka bilaabanaya magaalada Sotji ee dalka Ruushka, xaaladda hadda aaggaas ka taagan awgeed. Sidaasna waxaa idaacadda SR international u sheegtay Annika Sönnerborg oo aqalka boqortooyada ku qaabbilsan warbaafinta.
- Amiiradda koowaad uma dhoofi doonto ka qaybgalka cayaaraha naafada ee Sotji, xaaladda aaggaas ka taagan awgeed.
Iska hor-imaadka soo kordhaya dhextaagan dalalka Ukraaiina iyo Ruushka ayaa saameyn u yeelaneysa cayaaraha naafada oo dhowaan ka bilaabanaya magaalada Sotji ee dalka Ruushka. Cayaarahaasna waxaa sida horey loo qorsheeyey la furi doonaa maalinta jimcaha foodda nagu soo haysa. Magaalada Sotji ayaa xadka Ukraaiina u jirta 50 kiilomitir oo qura.
Aqalka boqortooyada Ingiriiska ayaa shalay isniintii ku dhawaaqay in amiirka Edward oo hoggaamin lahaa kooxda boqortooyada UK baahiyey booqashadii uu ugu kici lahaa magaalada Sotji kadib markii ay sidaas ku la talisay dowladda dalkaas. Waxaa iyaguna cayaarahaas qaaddacay wasiirro ingiriis ah oo halkaas u dhoofi lahaa.
Balse aqalka boqortooyada Iswiidhen ayaa markaas sheegay in booqashada Victoria ay u dhici doonto sidii horey loo qorsheeyey. Taasna hadda ayaa beddelay oo booqashadii amiiradda koowaad halkaas lagu baajiyey, kadib markii uu aqalka boqortooyadu la tashaday wasaaradda arrimaha dibedda, sida ay sheegtay Annika Sönnerborg:
- Sida ay caadadu ahayd in marka qoyska reer boqor ay dalka dibeddiisa u dhoofayaan ay u la tashadaan wasaaradda arrimaha dibedda ayaan hadda kala tashannay go’aankaan aan gaarney. Iyaga ayaana ku taliyey in amiiraddu ka joogto booqashada Sotji.
Qorshuhu wuxuu ahaa in amiiradda koowaad Victoria ay maalinta axadda oo bisha maarso tahay sagaalka u dhoofto Sotji, ayna halkaas joogto laba maalmood.
Wasaaradda hiddaha iyo isboortiga ayaa sheegtay in aan horay loo qorsheyn in wasiiradda isboortigu Lena Adelsohn Liljeroth, ama wasiir kale ay cayaaraha ka qaybgalaan.